Jariif ba’an oo ka socda xeebaha Puntland - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Jariif ba’an oo ka socda xeebaha Puntland
Jariif ba’an oo ka socda xeebaha Puntland
Xeebaha Puntland gaar ahaan gobolka Bari ayaa lagu arkayaa Doonyaha & Maraakiibtii Jariif ee ugu badnaa kuwaas oo guranaya Kheyraadka Badda.
Maraakiib waaweyn oo laga leyahay dalal shisheeye ayaa bilaabay inay xaaluf xoogan ku sameeyaan kalluunkii yaaley xeebaha gobolka Gardafuu, waxaana durba cabasho xoogan ka muujinaya kalluumaysatada iyo shacabka kunool gobolkaasi.
Xeebaha degaanada Gumbax iyo Bareeda ayaa kamid ah meelaha jariifka ugu ba’an laga soo sheegayo, waxaana arrintaas cabasho xooggan ka muujiyay Kalluumeystada Degaanka.
Xaalufkaan ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan ay baddu furantay isla markaana kalluumaysatada gobolkaasi ay gashay rajada inay ka faa’iidaystaan kalluunka badda ku dhashay mudadii baddu xirnayd guud ahaan deegaamada Puntland.
Previous articleTurkey oo tijaabiyey gantaalaha S-400
Next articleMaxkamad ku taalla Hargeysa oo xukuntay rag lagu eedeeyay kufsi